Mihamavesatra ny vokatr’ilay andro ratsy…: tafakatra 12 ny maty, 40 790 ireo traboina | NewsMada
Par Taratra sur 24/01/2020
Mavesatra ny takaitra naterak’ilay andro ratsy nitondra ny orambe tsy niato nanditra ny herinandro manerana ny Nosy. Tafakatra 12 no maty ary 20 hafa tsy hita popoka. Mahatratra 40 790 kosa ireo traboina raha ny tatitra vonjimaika nomen’ny BNGRC, omaly. Ankoatra izany ireo tanàna mitoka-monina sy tanimbary tondraky ny rano, ny lalana tapaka…
Nanao tombana ny fahavoazana vokatry ny ora-mikija naterak’ilay faritra andro ratsy tao Mozambika, nandritra ny herinandro, tamin’ny faritra maro eto Madagasikara, ny BNGRC. Fantatra tamin’izany fa mavesatra ny fahavoazana ary maro ny fatiantoka.
Olona 22 tsy hita popoka lasan’ny rano ary olona 12 hafa maty vokatr’ireny orambe ireny. Nahatratra 40 790 kosa ireo traboina manerana ny Nosy. 11 312 ny traboina any Alaotra Mangoro ary 11 nafindra toerana. 379 kosa ny traboina eto Analamanga raha 753 ny any Betsiboka. Nafindra toerana avokoa izy ireo. Roa tsy hita popoka ary telo maty tany Betsiboka hatrany.
Nahatratra 8 049 ny traboina ao amin’ny faritra Boeny. 1 007 ireo nafindra toerana, 20 tsy hita popoka ary roa maty tany an-toerana. 800 ny traboina ao amin’ny faritra Melaky ary 800 ihany koa nafindra toerana. Ho an’ny ao Sofia, 18 900 ny traboina ary 400 nafindra toerana.
Nandray fepetra ny eo anivon’ny BNGRC, omaly maraina, ka nandefa ireo tompon’andraikitra ao aminy nanao “survol” na fitazanana avy eny ambony amin’ny alalan’ny angidimby hahafantarana ireo faritra tena voa mafy.
Taorian’izay, nihazo an’i Mahajanga izy ireo ka nanao fivoriana tsy ara-potoana miaraka amin’ireo tompon’andraikitra ambony any an-toerana mikasika ny fepetra raisina manoloana izao voina izao.